Shabakada Squawka Oo Soo Xulatay Shaxda Kooxdii Ugu Fiicnayd Champions League Xilli Ciyaareedkan, Xiddigaha Kusoo Baxay & Kuwa Booska Loo Waayay. - Gool24.Net
Shabakada Squawka Oo Soo Xulatay Shaxda Kooxdii Ugu Fiicnayd Champions League Xilli Ciyaareedkan, Xiddigaha Kusoo Baxay & Kuwa Booska Loo Waayay.
Shabakada Squawka ayaa soo xulatay shaxda kooxdii ugu fiicnayd tartanka Champions League xilli ciyaareedkan kaddib markii tartankaas lagu soo af-meeray magaalada Madrid xalay.
Liverpool ayaa noqotay kooxda ugu dambayn kor u qaaday koobkaas 14 sano kaddib waxaana loo caleemo saaray boqornimada qaarada Yurub kaddib guul 2-0 ah oo ay ka gaadheen Tottenham.
Haddaba, Yay ahaayeen ciyaartoyda ugu wanaagsan tartankan intii uu soo socday? Shabakada ayaa afeef ka dhigatay inay koox kasta saddex ciyaartoy ugu badnaan kasoo xulatay.
Squawka ayaa sheegtay in haddiiba aysan koox kasta saddex ciyaartoy kasoo xulateen ay kooxda wacdaraha soo dhigtay ee Ajax noqon lahayd mida 75% qabsata shaxdeeda.
Aan ku bilawnee waxa booska goolka sida la filayo inay xataa UEFA samayso kusoo baxay Alisson Becker oo noqday xiddigii garoonka ee kulankii Final-ka ee xalay.
Labada ciyaartoy ee kale ee Liverpool ugu soo baxay shaxdan ayaa kala ah Virgil Van Dijk iyo Alexander Arnold waxaana afarta daafac dhammaystiray Jordi Alba oo Barcelona ka tirsan iyo kabtanka Ajax ee Matthijs De Ligt.
Khadka dhexe ayaa booska burburiyaha loo doortay Sergio Busquets waxaana labada khad dhexe ee ka horreeya noqday Frankie De Jong oo isku soo muujiyay Ajax iyo Moussa Sissoko oo soo ahaa isku xidhaha Tottenham ee tartankan.
Saddexleyda weerarka ayuu hoggaaminayaa gool dhaliyaha ugu sarreeyay tartankan ee Lionel Mess (12 gool) waxaana ku wehelinayay Dusan Tadic oo Ajax lix gool usoo dhaliyay.
Kylian Mbappe ayaa dhamaystiray saddexleyda weerarka balse xulashadiisa ayaa muranka ugu weyn dhalin karta balse waxa uu soo dhaliyay afar gool isaga oo shan kale caawiyay marka laga yimaado inay xilli hore hadheen.